Deep Yaitorwa Parts
Deep Yaitorwa Parts Assembly
Chii zvakadzika mufanidzo?
Deep mufanidzo iri semucheka simbi Anoumba mutoo umo semucheka chesimbi zvibereko riri radially kupinza achiumba vanofa nokuda zvokuimba zvinoitwa punchi. Masero anonzi "zvakadzama" yokukweva kana kudzika yakavhomorwa chikamu kwazvo dhayamita kwayo
Ndezvipi zvinhu kuita ARTMETAL basa pamwe?
For yakadzika nokudhirowa, zvinhu sarudzo dziri yakakura chaizvo uye anongoda yezvokutengeserana nesimbi zvose nechekare zvinowanikwa jira kana coils fomu kuti yakadzika mufanidzo. The chikuru zvinhu tinoshandisa riri Stainless simbi 200-400 dzakatevedzana. Nezvimwe CRS, there, aruminiyamu, nendarira, mhangura dziripo, zvakare.
Ndezvipi zvinhu thicknesses ARTMETAL basa pamwe?
Chii tolerances anogona ARTMETAL kuzadzisa?
With mubatanidzwa anofa uye yechipiri machine tinogona kupa tolerances kusvika .00254 mm (.0001 ")
Ndezvipi ARTMETAL yechipiri amabasa nezvaanogona?
tapping, kuchera, nomoto (TIG, third, gwapa), PEM, mhete, Standoff insertions, riveting, gungano, Electro-makorari, zvokuimba makorari (hairline, girazi), upfu unhani, jecha nenyunje, passivation, yakanamirwa pamifananidzo
Ndingaita sei kuti kotesheni?
Unogona kutumira RFQ kwatiri pamwe vanodhirowa kana ivhu kana kunyange drafts pamwe zvinofungidzirwa uwandu, isu ichakupa mukati 2 kushanda mazuva.
Chii vanodhirowa vanogona ARTMETAL basa pamwe?
Jpg, PDF, DWG, DXF, NHANHO, IGS, nezvimwewo.
Chii ARTMETAL kuti mubhadharo mazwi?
Ndinogona sei kubhadhara?
T / T, L / C, D / P, yokumadokero pamwe, etc. Tinoshandisa munhu aina uye imupota mumiririri kugamuchira muripo uye kutumira magwaro zviri wakabudiswa nezita mumiririri wedu. Tave tichishanda yedu mhiri kwemakungwa vatengi kwemakore (chinoumba Our basa iri mukugadzira uye nhema).
Sei Artmetal pave unhu?
Artmetal riri ISO9001 vaipupurirwa, vakapakata mamiriro-of-nounyanzvi michina uye ane vashandi unyanzvi, ruzivo ouinjiniya chikwata kuchengeta rimwe nerimwe kugadzirwa danho. Kana tine unhu nyaya, isu achagadzirisa kana kutsiva nhumbi kana dzosera mari yenyu.